(Waxaa laga soo toosiyay Maalinta Xoriyada Soomaaliya)
Maalinta Madaxbanaanida Soomaaliya (Af-Ingiriis: Independence Day of Somalia) waa maalin qaran laga xuso wadanka Soomaaliya, iyo Deegaanada Somaliland. Gobolada Waqooyi Soomaaliya maanta loo yaqaano Somaliland ayaa 26 Juun 1960kii ka qaatay gumeeystihii Ingiriiska ee ka talin jirey British Somaliland. Maalmo yar ka dib, Koonfurta Soomaaliya ayaa madaxbanaanida ka qaadatey Italian Somaliland. Ugu dambeyn, 1dii Luuliyo 1960kii waxaa midoobey Goboladii Waqooyi iyo Koonfurta Soomaaliya halkaasi oo lagu aasaasay dowladii iyo maamulkii ugu horeeyay gayiga Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Guud ahaan, maanta waxaa wadanka Soomaaliya laga dabaaldegaa 1da Luuliyo oo ah maalinta Qaranka Soomaaliya; halka Maamulka Somaliland laga dabaaldegaa 26ka Juun oo ah Maalinta Madaxbanaanida Jamhuuriyada Somaliland.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Maalinta_Madaxbanaanida_Soomaaliya&oldid=167705"
Last edited on 1 Abriil 2017, at 08:42